optical ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိန်းဂဏန်းများ - Paradoxa ရေးဆွဲ
optical ထင်ယောင်ထင်မှား & မဖြစ်နိုင်ကိန်းဂဏန်းများ
ပိုများသော optical ထင်ယောင်ထင်မှား
Coloring စာမျက်နှာများအားလုံးအသက်အရွယ်သားအဘို့ကြီးစွာသော pastime ဖြစ်ကြသည်။ ကြှနျုပျတို့၏ website တွင်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာများအပေါ်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်: optical ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိန်းဂဏန်းများအားဖြင့်ရေးဆွဲဒါခေါ်ဝိရောဓိကလေးတိုင်း fascinate ။
optical ထင်ယောင်ထင်မှား - ထင်ယောင်ထင်မှား
သို့မဟုတ်တူညီသော template ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလူဦးသည်အခြားအမှုအရာအသိအမှတ်ပြုရန်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အကျွမ်းတဝင်ဝန်းကျင်မှာပေါ်ပေါက်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်အဖြစ်လမ်းအတွက်တောင်မှကိုယ့်အမှုအရာ, ရေးဆွဲနေကြသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကရောထွေးနေသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ optical ထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်။ လင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်လျော်သောပုံစံဖြင့်စာမျက်နှာကိုသွားပါ:
ဘယ်ပုံကအခြားထက် သာ. ကြီးမြတ်ပါသနည်း
ဘယ် circuit ကို သာ. ကြီးမြတ်သည်
link ကိုနှိပ်ခြင်းအားသင့်လျော်သော template ကိုအတူစာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်:
optical ထင်ယောင်ထင်မှား - အဘယ်အရာကိုသင်မြင်?
အမြဲရွှေ့ဖို့တစ်ခုခုပုံရသည်, အောက်ကဓါတ်ပုံတွေမှာဂရုတစိုက်ကြည့်ရှု! ရုပ်တုဆင်းတုပေါ်တစ်ဦးကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုပ်တုဆင်းတုကိုကျယ်ဝန်းစေ:
ဤရွေ့ကားစက်ဝိုင်းရွှေ့ .... မဟုတ်
ဒီအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှာတဦးတည်းကြည့်ပါလျှင်, လူ့ရူပါရုံကိုစက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းမှုရွေ့လျားများ၏အထင်အမြင်ရှိပါတယ်။ သင်တန်း၏, ရုပ်ပုံကိုအလျှင်းမပြောင်းရွှေ့!
ဤတွင်လွန်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ငါတို့မျက်စိနှင့် တွဲဖက်. ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်လှည့်ကွက်ကစား: အ optical ထင်ယောင်ထင်မှားပုံစံတစ်ခုစိတ်ကူးယဉ် pulsation ၌တည်ရှိ၏။
Kanisza စတုရန်း - တစ်ခုခုမရှိအဘယ်အရာကိုမြင်
ငါတို့သည်ကိုယ်မျက်စိနှင့်အလွန်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရ, ယုံကြည်ပေမယ့်လည်း: အလယ်၌အဘယ်သူမျှမစတုရန်းရှိလူသိများပုံစံများကိုရှာဖွေနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ပုံပုံဖွဲ့စည်းခဲ့။ ဤဖြစ်စဉ်သည် "Kanisza စတုရန်း" အဖြစ်လူသိများသည်။
တကယ်လား? သင်ကယုံကြည်သို့မဟုတ်မဖွစျစေ, လက်ဝါးကပ်တိုင်လိုင်းများလုံးဝအပြိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်လိုင်းများအချင်းချင်းအပြိုင် run နှစ်ခုကွဲပြားလိုင်းများအာရုံစိုက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အသိပေးစာကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးများအတွက် optical ထင်ယောင်ထင်မှား
မဖြစ်နိုင်ပုံ - တြိဂံ
မဖြစ်နိုင်ပုံ - စက်ဝိုင်း
မဖြစ်နိုင်ပုံ - လှေကားအုံ
optical Illusion လိုင်း
optical Illusion - လိုင်း
optical Illusion - Size ကို
optical Illusion - စက်ဝိုင်း